သငျသညျမေးခွန်းများကို, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အဆက်အသွယ်ငါ့ကိုရှိပါကသင်အမှန်တကယ်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ကိုချစ်!
မိုဘိုင်း: 072-203 63 74
သင်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောစာတစ်စောင်ရေးလိုက်ချင်လျှင်, သင်သာ e-mail, သို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့်သင့်ထံမှနား ထောင်. , ငါသည်ငါ့လိပ်စာဖော်ပြ။
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 12:07